सर्वश्रेष्ठ ब्ल्याकजेक रणनीति गाइड - UK 2021 ✅
Home » क्यासिनो खेलहरू » ब्ल्याकज्याक » ब्ल्याकजेक रणनीति
कालोज्याकमा प्रारम्भिक समर्पण कसरी खेल्ने
ब्ल्याकजेकमा कसरी ढिलो आत्मसमर्पण खेल्ने
खेलमा समर्पणको अर्थ के हो
ब्ल्याकजेकमा जोडी विभाजन रणनीति
जोडी विभाजन गर्न क्यासिनो नियमहरू के हुन्?
जोडी विभाजन कसरी खेल्ने
किन धेरै प्लेयरहरूको लागि विभाजनले काम गर्दछ?
बोल्ड ब्ल्याकजेक रणनीति
रक्षात्मक ब्ल्याकजेक रणनीति
आपत्तिजनक ब्ल्याकजेक स्प्लिटिंग रणनीति
ब्ल्याकजेकमा डबलि Down
कसरी डबल डाउन रणनीति काम गर्दछ
क्यासिनोमा के नियमहरू हुन्छन् जब एक डबल डाउन पूरा गर्दछ
कम्तिमा cards कार्डमा डबल डाउन
कमको लागि दुई पटक तल
पेशेवरहरू र दोब्बर गर्न को विपत्ति
ब्ल्याकजेक खेल्दा रणनीति हिट र स्ट्यान्ड गर्नुहोस्
कडा हातहरूका बारे तपाईलाई के थाहा हुनुपर्दछ?
ब्ल्याकज्याकको लागि बीमा र पैसा रणनीति
बीमा खेल्दा आधारभूत नियमहरू के हुन्?
पैसाको लागि पनि खेल्ने आधारभूत नियमहरू के-के हुन्?
कुनै पनि प्रकारको खेल खेल्दा, तपाईं निश्चित रूपमा ‘यसलाई जित्नको लागि’ यसमा हुन्छन्। यो पनि राम्रो हो जब यो ब्ल्याकज्याकको खेल खेल्न आउँछ। टेबलमा बस्न वा खेल ग्राहक खोल्न प्रयास गर्नु अघि, तपाईं त्यो मानसिकता र घर को किनारा जित्ने र हराउन प्रतिबद्धता हुनुपर्दछ। तर तपाईं कसरी खेल मा जीत को लागी कि एक कौशल को एक बिट र मौका को एक तत्व को आवश्यकता छ? कसरी तपाईं आफ्नो लाभ मा घर को किनारा कम गर्नुहुन्छ?
यो हुनको लागि, यो उत्तम हो कि तपाईं आधारभूत ब्ल्याकज्याक रणनीतिहरूको बारे सचेत हुनुहुन्छ र उचित अवस्थामा रणनीति कसरी सही तरीकामा प्रयोग गर्ने भनेर सिक्नुहोस्। तल सूचीबद्ध केहि लोकप्रिय ब्ल्याकजेक रणनीतिहरू धेरै उत्साहीहरू द्वारा खेलाइएका छन्, र नमूना परिस्थितिहरू जहाँ तपाईं यसलाई खिच्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ केही चालहरू वा रणनीतिहरू छन् जुन ब्ल्याकज्याकको खेलमा प्रयोग गरिन्छ, तर त्यहाँ एक मात्र सबैभन्दा विभाजित वार्ता-आत्मसमर्पण हुन्छ। खैर, यो बुझिन्छ किन धेरै खेलाडीहरु यस रणनीति को बारे मा आलोचनात्मक छन्। एक सुरुवातको लागि, रणनीतिको नाम शंकास्पद र नकारात्मक छ। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईंलाई आफ्नो हात समर्पण गर्न भनियो।
धेरै ब्ल्याकजेक खेलाडीहरूको लागि यो चाल अकल्पनीय छ किनभने खेलमा भाग लिँदा मुख्य वस्तु भनेको घरलाई जित्नु र हराउनु हो। यो विकल्प (वा रणनीति) मा केहि नकारात्मक अर्थ हुन सक्छ तर दिमागमा राख्नुहोस् कि यसले वास्तवमा विशेष परिस्थितिहरूमा अर्थ राख्दछ र यदि सही छ भने। त्यसो भए कसरी ब्ल्याकजेकमा समर्पण विकल्पले काम गर्दछ? यहाँ एउटा नमूना स्थिति हो जसले समर्पणलाई वर्णन गर्दछ:
हातको मूल्य र क्यासिनो डिलरको अप-कार्ड विचार गरेपछि, तपाईंले बुझ्नुभयो कि तपाईं जित्ने सानो अवसर छ। सबैभन्दा उज्यालो विकल्प भनेको हात हराउनु हो जुन आधा शर्तले बनेको आत्मसमर्पणको आवश्यक पर्दछ। त्यहाँ कसरी दुई तरिका छन् तपाईले आफ्नो निर्णय लाई संचार गर्नुहुन्छ:
परम्परागत ईंट र मोर्टार क्यासिनोहरूमा, तपाईंले मौखिक रूपमा क्यासिनो डिलरलाई घोषणा गर्नु आवश्यक पर्दछ जुन तपाईं यो प्रस्तावको फाइदा लिन चाहानुहुन्छ।
अन्य क्यासिनोहरूमा, हात सिग्नलहरूको प्रयोग आत्मसमर्पण सुविधा प्रयोग गर्ने अभिप्राय देखाउन आवश्यक पर्दछ
जे पनि विकल्प खेलाडीले चयन गरेको हो, यो डिलरको काम हो कि दैवरको आधा हिस्सा हटाएर टेबलमा दुईवटा कार्डहरू हटाएर यसलाई राख्ने ट्रेमा राख्नुहोस्। छोटकरीमा, जब तपाईं सरेंडर विकल्पको फाइदा लिनुहुन्छ, तपाईंले हात खेल्ने अधिकार छोड्नुहुन्छ, र तपाईं स्वचालित रूपमा आफ्नो दांव गुमाउनुहुन्छ।
अब, तपाई कसरी ब्ल्याकजेकको खेलमा आत्मसमर्पण खेल्न सक्नुहुन्छ भन्नेमा दुई तरिकाहरू छन्- तपाईले प्रारम्भिक आत्मसमर्पण र ढिलो आत्मसमर्पणको लागि रोज्न सक्नुहुन्छ।
यो एशिया र युरोपमा सञ्चालित धेरै क्यासिनोहरूमा लोकप्रिय प्रस्ताव हो। नामले देखाउँदछ, यो विकल्प धेरै पहिले नै डिलरले सम्भव ब्ल्याकज्याकको लागि आफ्नो हात जाँच गरेको अघि रमाइलो हुन्छ। एक मौका दिंदा, खेलाडीहरूले प्रारम्भिक आत्मसमर्पण विचार गर्नुपर्छ किनकि यो अधिक अनुकूल छ र खेलाडीहरूलाई जित्ने राम्रो मौका दिन्छ।
यदि तपाइँ एस बिरुद्द प्रारम्भिक आत्मसमर्पण छनौट गर्नुहुन्छ भने, तपाइँको मौका ०.9 per प्रतिशतले बढ्छ, र १० को विरुद्धमा आत्मसमर्पण गर्दछ भने, यो ०.२4 प्रतिशत छ, यसलाई .6..63 प्रतिशतमा बढाएर छ डेक एस १17 ब्ल्याकजेक खेल खेल्दा।
यदि प्रारम्भिक समर्पण तालिकामा प्रस्ताव गरिएको छ भने, निम्न हातहरू समर्पण गर्नुपर्दछ:
यदि यो Ace को बिरूद्ध हो भने, कडा to देखि plus प्लस ss, र १२ देखि १, सम्म, ss देखि ss सम्मिलित गर्नुहोस्
डिलर9को बिरूद्ध, कडा १० देखि6सम्म आत्मसमर्पण गर्नुहोस्, तर s एस छोड्नुहोस्
डिलरको १० को बिरूद्ध, कडा १ to देखि १ surre मा आत्मसमर्पण गर्नुहोस्, ss र ss समावेश गर्दछ
ढिलो आत्मसमर्पणमा, तपाईं यो विकल्पको मजा लिन सक्नुहुनेछ यदि डिलरले पहिले नै ब्ल्याकजेकको लागि आफ्नो कार्ड जाँच गरेको छ। यदि डिलरको हात पहिले नै ब्ल्याकजेक हो भने, तब यो विकल्प उप्रान्त उपलब्ध हुनेछैन, र खेलाडीले शर्त गुमाउँदछ जबसम्म यो ब्ल्याकज्याक छैन। यदि तपाईंले यो विकल्प प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने, घरको किनारा ०.०7 प्रतिशतले कम भयो मल्टि-डेक खेलहरू खेल्दा।
आत्मसमर्पण विकल्प लिनु भनेको घरको किनारा घटाउने शीर्षमा धेरै फाइदाहरू छन्। यदि तपाईं यस प्रस्तावको फाइदा लिनुभयो भने, तपाईंले आफ्नो बैंकरोल स्थिर गर्ने मौका पाउनुहुनेछ, र तपाईं आफ्नो घाटा टेबुलमा सीमित गर्न सक्नुहुनेछ।
कोहीले भन्नेछन् कि जब ब्ल्याकजेक तालिकामा खेल्ने क्रम आउँछ तब आत्मसमर्पण एउटा मूर्ख चाल हो। यी आधारहीन धारणा हो; यदि तपाइँ यो खेल्नको लागि सहि चाल हो भन्ने सोच्नुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाइँको बैrollरोललाई बचाउन समर्पण छनौट गर्नुहोस्।
यो एक रणनीति हो जुन सही तरिकाले बुझ्दैन र धेरै खेलाडीहरू द्वारा विश्लेषण गर्दैन। केही खेलाडीहरूले यो प्रस्तावको फाइदा लिँदैनन्, र अरूहरूको लागि, तिनीहरूले आफ्नो हात बिना कारण वा यसको लाभको साथ विभाजित गर्छन्। यो केस हुनु हुँदैन किनभने विभाजनको रणनीति खेलाडीहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो जसले घरको किनारालाई कम गर्न चाहान्छन्।
विभाजनको लागि नियमहरू बुझ्नको लागि सजिलो छ। यदि तपाईंलाई समान मानको दुई कार्डहरू दिइन्छ भने, तपाईंसँग यी दुई हातमा छुट्याउने विकल्प छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं $6शर्त गर्नुहुन्छ र तपाईं 3s को एक जोडी प्राप्त गर्नुहुन्छ, तब तपाईंको एकल हातमा कुल6छ। क्यासिनो नियम अन्तर्गत, तपाईं हात6को रूपमा खेल्न सक्नुहुन्छ र अतिरिक्त कार्डहरू लिन सक्नुहुन्छ, वा तपाईं s हरूलाई दुई हातमा विभाजन गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं यो विकल्प सक्रिय गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं लेआउटमा मूल बेटको अर्को अर्को समान शर्त बस राख्नुहुन्छ। यसको मतलव तपाईले अर्को $ place मौलिक दांवको छेउमा राख्नु पर्छ, र यसको माथि होइन। यो डिलरका लागि संकेतको रूपमा काम गर्दछ जुन तपाईं s हरू विभाजन गर्न चाहनुहुन्छ, र तपाईं २ हात खेल्न चाहनुहुन्छ। आधारभूत ब्ल्याकजेक नियमहरूमा, तपाईले पहिले आफ्नो दाहिने हात पट्टि खेल्नु पर्ने हुन्छ।
तपाईंले जोडी विभाजनको फाइदा लिनु अघि, तपाईंलाई पहिले प्रयोग गरिएको कार्डहरूको संख्या र अवस्थित खेल नियमहरू थाहा पाउनुपर्दछ। यी सबै विवरणहरू प्राप्त गरिसकेपछि, त्यसपछि तपाईं विभाजन गर्न को लागी निम्न सुझावहरूलाई विचार गर्न सक्नुहुन्छ:
एकल डेकमा NDAS सँग खेल्दा, तपाईंसँग -3–3 छ, र डिलरको अप-कार्ड7छ।
DAS सँग डबल डेक खेल खेल्दा, तपाईंसँग -4–4 छ, र डिलरको अप-कार्ड is छ।
DAS सँग छ-डेकमा खेल्दा, तपाईंसँग a9-9 हुन्छ, र डिलरको अप-कार्ड is हो।
NDAS होल्डिंग holding–4 र अप-कार्ड is छ भने डबल-डेक गेमसँग खेलेमा विभाजन नगर्नुहोस्।
त्यहाँ केही कारणहरू छन् जुन विभाजनले तपाईंको लागि काम गर्न सक्दछ:
विभाजनको साथ, तपाईं बोल्ड रणनीति प्रयोग गरेर औसतमा बढि जीत्न सक्नुहुन्छ, वा
बचावात्मक रणनीति प्रयोग गरेर औसतमा कम पैसा गुमाउनुहोस्, वा
तपाइँ आक्रामक रणनीति प्रयोग गरी सजिलैसँग हराएको हातलाई जित्न सक्नुहुन्छ
तल बोल्ड, आपत्तिजनक र डिफेन्सिवल ब्ल्याकजेक रणनीतिहरू बीच एक संक्षिप्त विवरण र भिन्नताहरू छन्।
यस रणनीतिमा, तपाईं पहिले नै जित्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ, र जब तपाईं विभाजन गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाईं अधिक पैसा जित्नुहुनेछ।
यसको लागि घाटामा कटौती गर्न टेबुलमा थप शर्त लगाउनु पर्छ। यो विभाजित गर्न को लागी एक जटिल दृष्टिकोण को लागी लाग्न सक्छ, तर यो लामो समय मा समझ मा बनाउँछ। यस कदमको पछाडि तर्क यो छ कि यद्यपि तपाईं लामो समय मा पैसा गुमाउन हुनेछ जब तपाईं बचावत्मक विभाजन, तपाईं अधिक गुमाउन भने तपाईं विभाजित छैन।
यो सबैभन्दा सिफारिश गरिएको रणनीति हो जब यो विभाजनको लागि आउँदछ किनभने तपाईंसँग हराउने हातलाई विजयी स्थितिमा बदल्ने मौका छ।
सामान्य नियमको रूपमा, ब्ल्याकजेकको खेलमा विभाजन गर्नु रणनीतिको एक रूप हो जुन तपाईंलाई हार्ने स्थितिलाई विजयी बनाउने अनुमति दिन सक्छ। दिमागमा राख्नुहोस् कि विभाजनमा, तपाईं अधिक स्प्लिटमा अधिक पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, तर अन्य विभाजनकारी निर्णयहरूमा कम संग समाप्त हुन सक्छ। यो एक महत्वपूर्ण रणनीति हो कि प्रत्येक खेलाडी सचेत हुनुपर्दछ उनीहरूले वास्तविक पैसाको लागि खेल्न प्रयास गर्नु अघि, वा उनीहरूले अनुभवी खेलाडीहरू बिरूद्ध खेल्नु अघि।
के तपाईंलाई थाहा छ ब्ल्याकजेक खेल्दा, तपाईंलाई मात्र सबै हातहरूको 47 47 प्रतिशत (सम्बन्धहरू समावेश नगरी) जित्न सकिन्छ? अब, यदि तपाई गणित गर्नुहुन्छ भने, यसको मतलब यो हो कि लामो दौडमा, तपाईं खेलको हराउँदै हुनुहुन्छ। तर यस अवस्थाबाट बाहिर एक तरीका छ, र यो ब्ल्याकज्याकमा डबलिंग रणनीति को उपयोग मार्फत छ।
डबल डाउन रणनीतिमा, खेलाडीलाई एक थप कार्ड पाए पछि स्ट्यान्डको बदलामा शर्तमा डबल गर्न मौका दिइन्छ। अतिरिक्त शर्त मूल शर्तको छेउमा बक्समा राखिन्छ। ईंट र मोर्टार क्यासिनोहरूमा खेल्दा, तपाईंले अतिरिक्त चिप्स बेटि box बक्सको बाहिर मूल बाजीको छेउमा राख्नुपर्दछ, र यसलाई औंलाले औंल्याउनुपर्दछ।
जब क्यासिनो डिलरले तपाईंलाई डबल डाउन गर्न अनुमति दिन्छ, यसको मात्र मतलब यो हुन्छ कि तपाईं अर्को कार्डको सट्टामा शर्तलाई डबल गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै जसो क्यासिनोमा, डीलरले खेलाडीहरूलाई कुनै पनि दुई-कार्ड संयोजनमा डबल डाउन गर्न अनुमति दिँदछ, तर केही क्यासिनोहरूले यस विकल्पलाई विशिष्ट हातहरूमा प्रतिबन्धित गर्न सक्दछन्। तपाईं राम्रो डिलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं क्यासिनोमा खेल्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई कुनै पनि जोडीमा डबल गर्न अनुमति दिन्छ।
जहाँ जहाँ तपाइँ खेल्नुहुन्छ, तपाइँले यो याद गर्नु आवश्यक छ कि त्यहाँ दुई चरहरू छन् जुन यो रणनीति विचार गर्दा खेलमा हुनुपर्दछ। पहिले, तपाईंले आफ्नो हातको कूल मूल्य र डिलरको अप-कार्ड विचार गर्नु आवश्यक छ। जब सम्भव हुन्छ, तपाईंले दुबै तल झर्नु पर्छ यदि तपाईं कडा,,,, १०, वा ११ मा समात्दै हुनुहुन्छ, वा तपाईं एक नरम १ 13 (A-2) १ 18 (A-7) मार्फत पाउनुहुन्छ।
कालोज्याक खेल्दा तपाईंले एउटा बचाउको दृष्टिकोणलाई विचार गर्नु आवश्यक छ किनभने तपाईंले यो विश्वास गर्नुपर्दछ कि डिलरको हातले लगातार तपाईंको हातहरू पिट्नेछ। दोब्बर पछाडि विचार भनेको सही समयमा अपमानजनक रणनीति अपनाउनु हो जब क्यासिनो डीलरलाई खस्ने ठूलो सम्भावना हुन्छ वा तपाईंसँग डिलरको हातमा किनारा हुन्छ।
नरम हातहरूमा डबल गर्नुका यसको फाइदाहरू छन्, तर धेरै खेलाडीहरूले प्रायः तिनीहरूलाई यो बुझ्दैनन्। जब नरम हातहरूमा दोहोरो हुन्छ, अभिप्राय क्यासिनो डीलरलाई उछिन्ने होइन, तर पैसा कमाउनु हो।
त्यहाँ केही क्यासिनोहरू छन् जुन खेलाडीहरूले तीन वा सोभन्दा बढी कार्डहरू डबल गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरण को लागी, तपाईसँग 5–3 छ र ११ को मानको लागि get प्राप्त गर्नुहोस्; तपाईं अझै तेस्रो कार्ड ड्रईंग पछि तल डबल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो टेबलमा तपाइँलाई उपलब्ध गराइयो भने तपाइँले ०.२ प्रतिशत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
डबल डाउनको साथ मुख्य विचार यो हो कि तपाईले सुरुको ब्याज बनाउनुहुन्छ। तर त्यहाँ केही क्यासिनो छन् जुन तपाईंलाई कम रकममा डबल गर्न अनुमति दिन्छ। यसको मतलब यो हो कि यदि तपाइँको मूल शर्त २० डलर हो भने, तपाइँ यस रकम भन्दा कममा डबल गर्न सक्नुहुन्छ। जबकि यो अनुमति छ, दिमागमा राख्नुहोस् कि अनुभवी खेलाडीहरूले यो चरण सिफारिस गर्दैनन्। कममा दोब्बर हुने समस्या यो हो कि यसले तपाईंलाई तपाईंको फाईन्स अधिकतम गर्न अनुमति दिँदैन।
यदि तपाईं ब्ल्याकजेकको बारेमा गम्भीर हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले डबल गर्ने अवधारणा बुझ्नुभयो। यदि सही तरिकाले प्रयोग गरियो भने, दोब्बर बनाउने रणनीतिले तपाईंलाई क्यासिनो किनारा कम गर्न र बढी पैसा जित्न मद्दत गर्दछ।
डबल डाउन रणनीतिले तपाईंलाई अतिरिक्त ब्याज राख्न अनुमति दिन्छ यदि तपाईंको हातहरू जित्ने राम्रो मौका छ। यस प्रकारको रणनीतिलाई तान्नको लागि, तपाईंले आफ्नो शर्तलाई दुब्लो बनाउनु आवश्यक छ, जसको अर्थ हो कि तपाईं अघि जानकारी दिईएको खण्डमा बढी जोखिम उठाउनुहुनेछ। त्यहाँ विभाजन जोडीमा डबल डाउन गर्ने अवसर पनि छ, यदि क्यासिनोले यसलाई अनुमति दिन्छ भने।
उदाहरणको लागि, यदि तपाईंसँग १०-१० छ र डिलरले 4,4,5 वा shows देखाउँदछ भने तपाईं १०s लाई विभाजन गर्न सक्नुहुनेछ, दुबै हातमा डबल र आशा गर्नुहोस् कि तपाईं दुबैमा २१ प्राप्त गर्नुहुनेछ।
डबलिंगको साथ समस्या यो छ कि तपाईंले केही जोखिमहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। दिमागमा राख्नुहोस् कि डिलरसँग अझै किनार छ र योसँग हातको बारेमा बढी जानकारी छ। यही कारण हो कि क्यासिनोले सँधै खेलाडीहरूमाथि किनारा कायम गर्दछ। र यदि हातहरू बाँधिएका छन् भने, खेलाडी केवल स्ट्याकको फिर्ताको गणना गर्न सक्दछ।
जब ब्ल्याकजेक खेल्दा, अन्तिम निर्णय जुन तपाइँ अन्ततः विचार गर्नुहुन्छ कि तपाइँ हिट वा खडा हुनुपर्छ कि हो। यो खेलको त्यो अंश हो जुन धेरै प्लेयरहरूलाई चुनौती दिन्छ र गलत मार्ग कार्यान्वयन गर्दा अक्सर घाटा निम्त्याउँछ।
यदि तपाईं यस कार्ड खेलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए यो महत्त्वपूर्ण हो कि तपाईंलाई आधारभूत क्यासिनो नियमहरू थाहा हुनुपर्दछ जब यो हिटि and्ग र स्ट्यान्डि comesको कुरा आउँछ। यहाँ केहि नियमहरु छन् हिट गर्न र दिमागमा राख्नको लागि उभिएर सम्बन्धित:
जब तपाईं हिट गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, यसको मतलब यो हुन्छ तपाईं अर्को कार्ड कोर्नुहुनेछ
यदि तपाईं उभिनुभयो भने, यसको मतलब यो हुन्छ कि तपाईं हातको मूल्यसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ
तपाइँलाई कुनै पनि कार्डमा २१ वा सो भन्दा कमको साथ खडा गर्न वा हिट गर्न अनुमति दिइन्छ
यदि तपाई हिट वा शरीरले सहमति जनाईएको संकेतहरू प्रयोग गरी चित्रण गर्न चाहानुहुन्छ भने डिलरलाई संकेत गर्नु यो तपाइँको काम हो
त्यहाँ प्रयोग गर्न उचित स are्केतहरू हुन् जब कार्डहरू व्यवहार गरिन्छ वा मुनि भेटिन्छन्
यदि तपाईंले हिट लिने निर्णय गर्नुभयो र हातको मूल्य २१ भन्दा बढी भयो भने, तपाईंको हात पक्रिनेछ, र तपाईंले आफ्नो शर्त हराउनुभयो।
जुन क्षण तपाईं स्ट्यान्ड अर्डर गर्नुहुन्छ, त्यस गोलले तपाईंको हात पूर्ण गर्दछ
जब ब्ल्याकजेक खेल्दै, सबैभन्दा खराब हात मानहरू जुन तपाईं बनाउन सक्नुहुन्छ हार्ड १२ देखि १ 12 हो। यो किनभने तपाईं लामो दूरी मा जीत भन्दा बढी हात गुमाउन छ। केवल एक अपवाद मात्र हो जब S17 खेलमा कम्तिमा दुई डेकको साथ खेल्दा जब against बिरूद्ध १ 17 एक विजेता हो। छोटकरीमा, यी सबै हात मानहरू हराउने आशा गरिन्छ। यसलाई परिप्रेक्ष्यमा राख्न, यो आशा गरिन्छ कि तपाईंले प्रत्येक १० हातमा hands हात गुमाउनुहुनेछ।
यस अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै, ब्ल्याकज्याक खेलाडीले कसरी खेल जित्न र खेल खेल्ने बेलामा विश्वस्त हुने गर्छ? किनकि त्यहाँ कुनै तरिका छैन कि तपाईं कार्डहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ, यसको सट्टामा के गर्न सक्नुहुनेछ मूल रणनीतिहरू पछ्याउनु जब यो कडा र नरम हातहरूमा आउँदछ।
एक खेलाडी को रूपमा, तपाइँ पनि बीमा वा पैसा रणनीति को बारे मा अधिक जान्नु पर्छ। यी साइड बेट्सले खेलमा डिलरको ब्ल्याकजेक बिरूद्ध खेलाडीहरूको रक्षा गर्नका लागि परिचय गरायो। तपाईं आत्मसमर्पण, विभाजन, हिट वा खडा कार्य गर्न अघि बिमा वा पैसामा शर्तको निर्णय लिनु पर्छ।
छिटो नै डिलर एक Ace अप कार्ड को घोषणा को रूप मा, उनीहरु खेलाडीहरु सोध्छन् यदि तिनीहरू एक बीमा शर्त बनाउन चाहन्छन्। यो वैकल्पिक हो र अलग शर्त हो जसमा तपाईं शर्त लगाउनुहुनेछ कि क्यासिनो डिलरको होल कार्ड १० वा चित्र कार्ड हो।
अभ्यासको भागको रूपमा, बीमामा तपाईंले बनाउन सक्ने शर्तको राशि राखिएको मूल शर्तको आधा हो। यदि बीमा शर्त पछि यो फेला पर्‍यो कि व्यापारीसँग १० वा तस्वीर कार्ड छ भने, यसको मतलब यो होः
तपाईंको बीमा शर्त2देखि 1 बाधा कमाउँछ, वा तपाईं मूल शर्त गरे बराबर रकम जीत
तर यदि डिलरले घोषणा गरे कि यो १० वा तस्वीर कार्ड होइन भने,
तपाइँ तपाइँको बीमा शर्त गुमाउनु भयो, र फेरि शुरू खेल।
जे भए पनि पैसा ठाउँमा आउँदछ यदि डिलरले एक अप कार्डको लागि Ace देखाए र खेलाडीसँग ब्ल्याकज्याक छ। यदि यो मामला हो भने, क्यासिनो डिलरले सोध्छ यदि तपाईं एक ‘पैसा पनि’ लिनुहुन्छ भने।
यदि तपाईं सहमत हुनुहुन्छ भने, डीलरले बनेको ब्याजमा पनि पैसा तिर्नेछ, र कार्डहरू खेलबाट हटाइनेछ। यसको मतलब यो हो कि डिलरले पहिले तपाईलाई भुक्तान गर्नेछ उसले कार्डमा एक झलक लिनु अघि नै। संक्षेप मा, पनि पैसा को व्यवस्था एक बीमा शर्त बनाउन को जस्तै छ यदि तपाईं एक ब्लेक जेक छ।
जे होस् ब्ल्याकजेक व्यापक रूपमा लोकप्रिय छ, धेरै खेलाडीहरू र उत्साहीहरू हातहरू बिगार्न भनेर चिनिन्छन्
खेलाडीहरूले घरको किनारा घटाउने र जित्ने राम्रो मौका पाउनेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न, उनीहरूको दिमागमा रणनीति हुनु महत्त्वपूर्ण छ
यदि खेलाडीहरूले क्यासिनो धारलाई १ प्रतिशत भन्दा कममा कम गर्न चाहान्छन्, त्यसो भए उनीहरूले आत्मसमर्पण गर्ने, दोब्बर पार्ने, बिभाजित गर्ने, र खडा हुने र हिट गर्ने सम्बन्धित केही रणनीतिहरू सिक्नु महत्त्वपूर्ण छ।
त्यहाँ दुई प्रकारका आत्मसमर्पण छन् जुन कालोज्याकमा प्रयोग गर्न सकिन्छ – प्रारम्भिक र ढिलो आत्मसमर्पण
तपाईंले हात विभाजन गर्न अनुमति दिनुहुन्छ यदि तपाईं समान मानहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, दुई ss वा दुई ss भन्नुहोस्
डबलि down डाउनमा, खेलाडीहरूलाई उनीहरूको दोगुलाई दोगु गर्ने मौका दिइन्छ
बीमा शर्त बनाउन सकिन्छ यदि डिलरले एस देखाउँदछ, र दांवको राशि मूल ब्याजको आधा हो